News 18 Nepal || सरकारले दुईपांग्रे सवारी कर बढायो, कुनमा कति बढ्यो ?
सरकारले दुईपांग्रे सवारी कर बढायो, कुनमा कति बढ्यो ?
काठमाडौं । सरकारले दुई पांग्रे सवारी साधनको कर बढाएको छ । शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले दुईपांग्रे सवारी साधनको कर २० प्रतिशतसम्म बढाएको हो । विधेयकले १२५ सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलरस्कुटरको अन्तशुल्क १० प्रतिशत बढाएको हो । ५०० देखि ८०० सिसीका बाइकमा भने २० प्रतिशत अन्तशुल्क बढाइएको छ ।
अन्तशुल्क बढेसँगै अब नयाँ आउने १२५ देखि १५५ सिसी इन्जिन क्षमताका दुई पांग्रे सवारीसाधनको मूल्य बढ्नेछ । नेपाली बजारमा यी मध्यम मूल्यका र धेरै बिक्री हुने सवारी मानिन्छन् । त्यस्तै २०० देखि ८०० सिसीका बाइकको पनि भाउ बढ्नेछ । ८०० सिसीमाथि भने अन्तशुल्क पुरानै दर, १०० प्रतिशत कायम छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ, १२५–२५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १८ हजार रुपैयाँ, २५०–४०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ५० हजार रुपैयाँ र ४०० सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा १ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।